Antsapanimahazo : « namono olona » koa Rajoelina – MyDago.com aime Madagascar
Antsapanimahazo : « namono olona » koa Rajoelina
Tratra ny telo lahy mpangalatra kisoa tany Antsapanimahazo distirikan’ i Faratsiho . Tsy matoky ny fomba fanasaziana azy ireny intsony ny mponina ka nitaky fitsaram-bahoaka. Tranga fanintelony tany amin’ iny toerana iny izay, tanatin’ ny telo taona. Dia olon-tsotra roa no matin’ ny zandary, 4 naratra, 5 voasambotra tamin’ ity!Nampifoha ny famaritana ny antsoina ho : « zone rouge » iny tranga iny.Moa tsy ny fiakara-dapa izay fantatra fa zone rouge » ihany koa ny raharaha 07 febroary 2009? izay nampangaina fa ny filoha Ravalomanana no nampitifitra? Iny tranga tany Antsapanimahazo dia manazava azo atao tsara ny « mamono » sy mitifitra olona anaty faritra mena.Araka izany, araka ny fomba fanao amin’ny resa-pitsarana dia lasa « Jurisprudence« , noho izany dia namono olona tany anaty faritra mena ihany koa ingaahy Rajoelina tany Antsapanimahazo.
Mateti-pitranga loatra saiky manerana ny Nosy ny halatra sy asan-dahalo arahin’ ny fahatofohan’ ny Malagasy noho izay, tamin’ izao Fitondrana Tetezamita izao. Inona ihany izao e !
Imbetsaka koa anefa ireo mpitarika mpitandro filaminana no milaza an-kaino aman-jery fa efa vonona hisoroka ny tsy fandriam-pahalemana toy izany. Mahavàka fa isaky ny avy nitranga hatrany ny asa ratsy vao tena mipoapoaka ery izany fampanantenana izany. Amin’ ny hetsiky ny mpanohitra fantapantany kosa indray izy ireo dia mampipoapoaka resaka mialoha, saingy tsy fampanantenana fa fampitandremana. Ohatra akaiky iny « andron’ ny tora-bato sy ny vely takotra ». Inona ihany izao e !
Manome baiko Ingahy Filohan’ ny Tetezamita tato ho ato ho an’ ireo minisitra, mba handaminana korontam-piainam-pirenena samy hafa karazana. Momba ny ateraky ny fiakaran’ ny vidin-tsolika sy ny saram-pitaterana ary ny Jirama, ohatra, ny firongatry ny halatra omby (fa tsy halatra kisoa),ny karama tsy an-ketran’ ny miaramila, ny tambinkaraman’ ny SECES… Milefaka ny fisehon’ ireny korontam-piainam-pirenena ireny saingy mikotrika fipoahana vaovao, satria tsy alamina any amin’ ny fotony. Mahomby noho ny fanongotana bozaka ifakany ve ny famboriana fotsiny ny felany sy ny tahony e ? Tsia dia tsia ! Ka inona ihany izao e !
Narangarangan’ ny filoha taloha Ratsiraka Didier ny fihaonana an-tampony. Tsy neken’ Ingahy izay satria « fanakorontanam-bahoaka », hono ! Napetraky ny Fianakaviam-be Iraisam-pirenena ny fitonena ara-tsosialy izay ara-politika ara-panatanterahana. Tsy misy io fitonena io mandraka ny androany, fa vao mainka aza « faharovitan’ ny lamba firakotry ny Malagasy mpanao lapa be hatrizay », araka ny fanehoan’ ny HMF ny « ady an-trano mananontanona » ! Ingahy mihitsy no notondroin’ ny mpanao politika mpanohitra ho fototr’ izao hitsokitsoka ilentehan’ ny Tanindrazantsika izao ! Teraka izay, indindra nony nisy ireny « notam » sy filàna kisa tamin’ ny fianakaviana Ravalomanana Marc ireny. Ka inona ihany izao e !
Lazain’ny mpanano politiky indray koa tato ho ato fa tsy ahombiazana amin’ ny famahana izao krizy izao io Tondro Zotra io. Inona àry no tsy efa natao tanatin’ izay telo taona izay, mba hanavotana antsika ? Tsy ny tsy fahombiazan’ ny tsangan-kevitra lanin’ ny mpanano politiky malagasy hatrany ivelan’ i Madagasikara ka hatreto an-toerana ihany ve no tena nampipoitra indray an’ io Tondro io ? Niditra ve ny SADC sy ny toa azy raha nahalamina ny raharahantsika isika samy isika ? Ny filana famatsiam-bola sy ny fankatoavan’ ny Fianakaviam-be Iraisam-pirenena an’ izao Tetezamita izao ange no setrin’ ny fampiharantsika mahitsy an’ io Tondro io e ! Dia lazao koa fa misy any ho any ny tondro zotra tonga lafatra, ny lalàm-panorenena tsy misy tomika, ary andraso eo izany… Ka inona ihany izao e ?
Namono olona indray Rajoelina ?
Hisambotra olona ny FAT hanafenana ny fahareseny !
Mektoub : ity tetezamita ity no be olona ratsy indrindra !
Auteur Solo Razafy*Publié le 11 mars 2012 Catégories Politique
20 réflexions sur « Antsapanimahazo : « namono olona » koa Rajoelina »
11 mars 2012 à 8 h 15 min
Thanks to Solo
L’on peut prendre en compte le fait que le « mbola tsy mikombona ny loha-malemy » d’Andry Rajoelina le putain fils de FrançAfrique ait accumulé du traik’efa en marketing
sur cette photo, peut être bien sans aucun masque de maquillage,
en réalité n’a aucun brin de charisme
Sans parler de sa constitution physique externe qui laisse à désirer (en tant qu’homme en tout cas)
Pourtant Homme fort s’exclame France à travers ses médias de soutien pour les actes et projets de soutien de AFRIQUE-à-FRANTAY,
LAPINOU, un enfant gâté-pourri-marginal, irresponsable commandeur de crimes contre l’humanité, si cela ne tient qu’à mon humble personne … je trouve si insignifiant
11 mars 2012 à 9 h 31 min
MAZAVA BE! DONDRONA IZAY TSY MAHAZO NY DIKAN’NY HOE:ZONE ROUGE
– BAD PARENTS MEANS BAD EDUCATION
– BAD EDUCATION CALLS FOR HIGH SCHOOL CITIZENSHIP PROGRAMM
– HIGH SCHOOL CITIZENSHIP PROGRAMM MEANS RESPONSIBLE AND PATRIOT TEACHERS;
IF IT IS NOT THE CASE, WE ‘LL GET MANY TGV (TEENAGERS OF GREAT VICES).IT ‘S UP TO US
MILA MIRESAKA AMIN’NY CSP I DADA REHEFA MIHAONA IZY EFA-DAHY IZAY HIARAHANA AMIN’NY UE,SADC ARAKAN’NY SOSON-KEVITR’I LOUIS MICHEL SATRIA TSY MANDROSO NY FAMPIHARANA NY TONDRO ZOTRA.
11 mars 2012 à 12 h 06 min
Hay ve ianao ihany no manamarina ry Solo Razafy fa namono olona Rainivoanjo a!
Tsipihiko eto lay » namono olona KOA Rajoelina », io « koa » io, no manamarina ny tuerie 7 fév…sns nataon-dRaosy. Ny lainga hono toy ny salaka, ka mamatotra ny tompony ihany. Avadibadiho im-7 ny lela woa alohan’ny hiteny.
Aza de feno haine olona ry HoAiza, fa ampitahao Raosy sy Zandrinay, fa ilaozany any am-paladihany raha charme izany, @n’izato photo montage mapme be.
Ny mapme @ireto Zanakosy ireto, politiquement, tsisy tainy mihitsy na de kely aza, tsisy proposition na stratégie tena mahomby hamerenana an-drainy, fa complexe @ fananana fahaizana sy hatsaratarehy no voizina eto, de manilaka zay zavatra ratsy mitranga rehetra @izao krizy io @ fitondrana. Fa sahy hiteny ve ny Zanakosy fa foana ny asan-dahalo tamin’ny andron-dRaosy, tsisy crimes, tsisy halatr’omby na kisoa tsy nahafaty olona. Rehefa tsy mahazaka olona @ opération lance pierre, ireo extrémistes mpomba an-dRaosy, zay vatsiany volabe, de any @ katolika no manipy grenade.
Ny mahatsikaiky de isaky ny misy vahiny tonga, ohatra ny OIF, de mirongatra foana ny asa fanakorontanana ataon’ny milisin-dRAOSY, hampisehoana @ vahiny, fa tsy milamina Madagasikara, de izay foana, kanefa paika efa lany andro be. Avy eo misy faty olona de Rajoelina no nanao iny.
Misaotra an’i Mamy Rakotoarivelo, sahy mandray ny andraikiny, ary miantso azy ankehitriny ny TIM Toliary, mba hirotsaka ho fidiana, satria Ravalomanana hoy izy ireo, tsy ilaina amnistie izany. De mihazakazaka be ny toe-dRaharaha hoy Rackiki!
Vita tanteraka ny @n-dRaosy, fa ny olona tsy hijapy soavaly maty zany. Rabe woa tsy miteniteny foana izany, sady mahita volana alohan’I Habib.
11 mars 2012 à 12 h 09 min
11 mars 2012 à 12 h 40 min
zany kay itony tgv-ndra Frantay: mila 3minitra vao mahaodina pseudo ny pd isany rabe=bogor!
11 mars 2012 à 12 h 44 min
mamerimberina hanana ny antitra
izay tsy zoviana fa
ry vondron’ireo mitonon-tena ho PeupleS (le) MalGachent
cause toujours tu intéresses
11 mars 2012 à 14 h 54 min
Efa betsaka izay fanazavana nitranga teto zay fa mbola tsy mikatona loha-malemy toy ny olona tohanany rabe vôplôsy fa ny tsianjerim-mpozany ihany no averimberiny foana!
11 mars 2012 à 18 h 21 min
Ny an’ny foza moa dia rediredy no betsaka mazàna, fa misy tsy azo lavina ny zavatra iray voalazany ! Ary izany, dia noho ny tsy fehetezan’ny soratra sy fanazàvan’i Solo Razafy an’izay tiany ho avaoka marina !
Tsy dia mety laotra ilay lohan-teny, ary betsaka no nahatsikaritra !
Tsy dia tsara raha ny « mpiaro ny ara-dalàna » indray no manome bala hitofirana an’ny prezidà !
Mila mailo rehefa manao fanambaràna tahak’izao AMIN’NY MANARAKA ! Izaho dia anisan’ny tsy mankasitraka an’izay voasoratra, ilay hoe : « NOHO IZANY DIA NAMONO OLONA TANY ANATY FARITRA MENA IHANY KOA INGAHY RAJOELINA » !
Inona no dikany io hoe « KOA » io ? TSY METY NY OHATRA NATAO !!
Rehefa nahafaty olona ny miaramila, Emmoreg, zandary, na ny paolisy (raharaha tany Toliara ) dia lazaina tsotra hoe nahafaty olona, fa tsy misy hidiran’izay faritra mena mihintsy !
Izao no atao hoe comparaison malheureuse, ary tsy manome tsiny an’ilay foza io aho, rahatoa izy ka mibitaka tahak’izao !
11 mars 2012 à 18 h 22 min
Efa mpamono olona hatramin’izay ny FOZA Rajoelina.
Hatramin’ny 26 janvier 2009. Nandoro olona anjatony tany anaty magazay. Ny 7 febroary 2009, efa tsy misy tsy mahalala fa izy no nampamono olona avy aty aoriana.
Ireo legalista efa ampolony izao. Mbola tsy mitsahatra ny mamono olona io fa ho hita eo rehefa mivadika ny rasa. Tandremo sao amin’izay vao mangataka amnistie. Tsy misy io
KM! Ilay « koa » anie mety ho ohatran’ilay miaramila vazaha nahafaty raim-pianakaviana iny tamin’ny 21 Janoary 2012 izay niandrasana an’i Dada.Malalaka be ny azo tenenina amin’io fa ny kely saina ihany no mibitaka amin’izany.
11 mars 2012 à 18 h 46 min
clap clap à Bemafohy!
11 mars 2012 à 19 h 08 min
Marina, ary ao anatiny daholo izany ; betsaka ny ohatra azo noraisina ! Kanefa hoy aho, tsy dia « nety tsara » ilay ohatra sy lohan-teny napetrak’i Solo Razafy !!
Averiko eto, fa tsy izaho irery no nahatsikaritra an’io !!
Izao no atao hoe manome « confusion » ao an-tsain’izay mpamaky, indrindra fa olona tsy dia mihezaka manadiady !
Ny foza dia foza ihany, manaonao foana ; hita fa « i » izao aza lazaina ga « a » ! Noho izany, tsy tokony alaina tahaka ; mila mailo sy mitandrina tsara rehefa manao zavatra, indrindra fa manoratra !
11 mars 2012 à 19 h 38 min
marina ny voalazanao km
nefa na inona tianao havoitra
avadik’ireo ambany foana ny ambony
IZAY NO MAHA-MPANONGAM-PANJAKANA AZY
Toute leur vie ils continueront à la passer à discréditer le notable Sem Ravalomanana Marc
Tsy hitanareo passionnant ve le débat rehefa mandrehatra vanja kely Rabe? ilaina tsara ny dikan’izany ny demkrasia. Solo RAZAFY eto tsy miteniteny foana zany, fa nanamafy fotsiny ny zavatra efa nitranga taloha.
Itony ry HoAiza itony le gasy tsy sahy miteny ny origine, rehefa mba hanontanian’ny vazaha hoe avy aiza enao any anaty métro, ary raha mba misy gasy mieresaka aminy, de tsy mahay mieny gasy hono izy. Tsy mahagaga koa moa fa ahitana olona hafahafa foana itony zanakosy itony. Menatra ny maha « MALGACHE » azy.
Tany aloha aho de nilaza, fa ny olon’ny TIM ihany no fahavalon’ny TIM, ny 3 mouvs ihany no fahavalon’ny 3 mouvs. Zanakosy ihany no fahavalon’ny zana-dRainivoanjo, ary Ra8 ihany no fahavalon-dRaosy. Raha misaina ireto Zanakosy ireto, de io no tokony hanaovana débat, satria efa miomankomana hisolo an-dRaosy RAMANGIDY.
11 mars 2012 à 23 h 45 min
Tena marina ary amiko tsy dia mahagaga ny lohateny toy itony @’izao
vaninandro izao satria na ity serasera ity aza dia efa AHIAKO ho faty tsy ho ela
raha mitohy izao,tsy vitan’ny tsy misy VIDEO intsony fa na ny vao2 aza efa MAHALANA be,
mampalahelo fa tsy mifanome tsiny e!!avelao i dada hiady irery ,avelao ny tanindrazana ho baboin’ny sasany.
12 mars 2012 à 7 h 57 min
Noheveriko fa voasambotra tany Antsampanimahazo ianao ity ry ranavalona !! MDR !!
Ho fanohizana ny resaka dia ho soloin-tsika ny lohan-teny ê !
Soson-kevitra omeko !!
« ANTSAMPANIMAHAZO : TSY MISY FITSAHARANY NY FAMONOAN’OLONA, ATAON’I RAJOELINA MPANONGAM-PANJAKÀNA !! »
« ANTSAMPANIMAHAZO : MITOHY NY FAMONOAN’OLONA ATAON’ILAY FILOU RAJOELINA, MPANGALAM-PAHEFÀNA !! »
Eo ihany fa mba nanao fety kely fa mangingiana loatra.Tsy nanadino e!
Nalahelo kely mihintsy aho fa tsy hita e!!iza intsony no azo HAMAHARANA??
Tsy maintsy mivonona @ loza rehetra fa tsy ary hitovy FISAINANA daholo ny olona.Ny vola mikararana ,mandeha tsara
tsy misy fanakatsakanana ny FANDROBANA ny harem-pirenena, izay mijoro @ MARINA hajedaka sns…any ianao ry dada
malala miadiva irery fa ny aty an-tanindrazana efa voky daholo,tafiditra ao anaty VOVO-POZA daholo.
Tsy azo afenina ny marina ry Solo Razafy a. Ary izany no tokony hoa asanareo milaza ho mpanao gazety, Tsy azo ampotoviana anefa ireo olona anankiroa ireo, de8 dia namono olona ankitsirano ary nanome baiko ireo mercenaire sudaf hitifitra, fa ity kosa dia hoy ianao hoe » fitsaram-bahoaka » ka ny vahoaka ihany no nanao ny fitsarany ary tsy nahazo baiko tan’iza tamn’iza, raha tsy hoe hoy i Solo R. angaha hoe ireo
Même absent, j’ai des antennes qui me poussent de partout et je sens venir le mensonge de RABE aux 5 pseudos à 10 000 km
16 mars 2012 à 20 h 00 min
BRAVO AU PHOTOGRAPHE qui a ZOOME LES DENTS DE LAPINOU !
Précédent Article précédent : Fambolen-kazo teny Imerinkasinina : Tsy maintsy ho avy Dada ary ho lany filoham-pirenena indray
Suivant Article suivant : Nanondrana indray « Baomba »?